FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA LABBE - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Labbe
Alika mifangaro mifangaro beagle / Labrador
Roo the Lab / Beagle cross (Labbe) - hoy ny tompony, 'Toy ny tena Beagle, manana orona be izy ary afaka moka Raccoon na opossum, ary toy ny Lab, dia mpankato izy ary mora mandeha tokoa. '
Ny Labbe dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Beagle ary ny Labrador retriever . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Drafitra mpamorona endrika = Labbe Retriever
Mpanoratra International Canine Registry®= Labbe
Bella the Labbe amin'ny faha-4 taonany
Ampiofano ny Lab / Beagle Mix (Labbe) amin'ny 1 ½ taona mitafy maitso sy mavo AKANJONAO
'Fararano ity zazavavy kely mahavariana ity. Lab / Beagle efa-taona izy. Mpiara-miasa lehibe ho an'ny vadiko rehefa nitety ny tanin'ny semi-vadiko izy ireo. 17 'tany amin'ny malazo izy ary 35lbs.'
Sandy the Labbe 33-pound (Beagador) amin'ny faha-7 taonany— 'Sandy dia roa tamin'izahay naka azy. Tena be fitiavana izy, tia misolelaka ambony fandriana, mitondra tena tsara, manana Beagle kely ao anaty hodiny, mora karakaraina, TIA ny volo fohy! Manana iray amin'ireo mena isika miteby boribory nubby mitts hampiarahinay miaraka aminy, arahin'ny borosy. Rehefa ataontsika indray mandeha isan-kerinandro dia tsy mandatsaka eran'ny trano izy! Tena marani-tsaina izy ary TIA mijery eo am-baravarankely. Ramatoa izy rehefa mandeha mitsangatsangana rehefa mampiasa ny vozon'akanjoko, fampahatsiahivana fotsiny izany. (Tsy manitsy azy akory isika amin'izany rehefa mandeha izy, tsara toetra izy.) '
Sandy ilay Labbe 33-be (Beagador) amin'ny faha-7 taonany
Alika Hunter the Beagle / Labrador mix (Labbe) amin'ny 11 herinandro
Alika kely Labbe mbola kely (Labrador Retriever / Beagle mix)
Alika kely Labbe (Beagle / Lab mix) avy amin'ny reniko AKC Lab sy AKC Beagle dada, sary natolotr'i Dakota Winds Ranch
Manararaotra ilay mixer Labrador Retriever / Beagle (Labbe) 6½ taona - 'Tsy fantatro hoe misy hafa any! Noraisiko tamin'ny famonjena azy tany NJ izy — ary izy no alika SWEETEST, tsara fitondran-tena ihany. Tiako izy! Matetika ny olona dia mieritreritra fa alika Lab izy, nefa avy eo mahazo be ny sofiny Beagly! Tsy fantatro izay hataoko raha tsy eo izy, izy no tsara indrindra. '
'Ity i Maddy, Labbe mahafinaritra antsika (na dia antsoinay hoe Labeagle na Beagador aza izy). Roa taona izy amin'ity sary ity. Noraisinay tamin'ny ARL teo an-toerana izahay fony izy mbola kely. Alika mamy sy sariaka ary manan-tsaina izy, nefa mety ho mafy loha ihany. Tiany ny fianakaviany ary te hiaraka amin'ny olona foana izy — mpiara-miasa be izy. Nahazo orona Beagle tena izy, ary mirona te-hanaraka azy foana, izay mety hahatonga azy hanadino ny fiofanany. Manana hodi-kazo any amin'ny Lab izy. Amin'ny maha alika azy dia manimba izy raha avela irery. Tsy toy ny Labs tena izy, tsy milomano izy ary raha ny marina dia manana fanalavirana mafy amin'ny rano. '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Labbe
mifangaro pekingese sy shih tzu
pics ny zaza siramamy gliders
yorkshire terrier shih tzu mifangaro amidy